Momba anay - Huaian Enyuan Tourist Products Co., Ltd.
Namorona vokatra tsara tarehy ho anao izahay
Izahay dia Enyuan Travel Products Co., Ltd. Huaian City, faritanin'i Jiangsu, Sina. Orinasa lehibe manampahaizana manokana amin'ny famokarana sy fivarotana vokatra fikarakarana am-bava. Niorina ny orinasa tamin'ny taona 2017. Taorian'ny asa mafy sy fampandrosoana efa telo taona mahery dia efa nanana tanjaka matanjaka izy io. Ankehitriny dia manana ekipa mpamokatra mahay sy mahay izy io, ary ny vokatra isan-karazany dia aondrana any amin'ireo firenena ampitan-dranomasina. Manana traikefa amin'ny varotra ivelany sy tranombokin'ny vokatra. Ny vokatr'ilay orinasa dia misy borosy nify plastika isan-karazany, borosy nify volomparasy, borosy lela, borosy interdental, borosy nify azo ampiasaina sns.
Ny orinasa dia mandrakotra velaran-tany 5000 metatra toradroa, izay mihoatra ny 4.000 metatra toradroa ny velaran'ny fananganana. Misy mpiasa maherin'ny 100. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana milina famokarana 40 ho an'ny borosy nify. Masinina famokarana borosy nify telo-polo sy andiana famokarana fiarovana azo antoka. Tsipika famokarana maromaro no miforona. Ny famokarana borosy nify isan'andro dia mety hahatratra 200.000. Ny vokatra isan-taona an'ny borosy nify vita dia mahatratra 50 tapitrisa.
Hatramin'ny taona 2018, ho valin'ny fandrarana plastika eropeana, ny orinasanay dia nanitsy ny làlan'ny indostrian'ny orinasa anatiny ara-potoana, mifantoka amin'ny borosy nify vita amin'ny volotsangana vita amin'ny volotsangana. Nanomboka nampiditra ny tsipika famokarana borosy nify volomparasy mandroso ny orinasa ary manavao tsy tapaka ny masinina ary manitsy ny tsipika famokarana. Mba hamokarana vokatra am-bava tsara kokoa fotsiny. Tao anatin'izay roa taona lasa izay, ny orinasa dia nahavita namokatra karazana borosy nify maherin'ny 40 sy borosy interdental ary vokatra nify hafa. Amidy amin'ny tontolo ivelany ireo vokatra ireo ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa. Ny filaharana borosy nify volotsangana isan-taona dia mety hahatratra 20 tapitrisa mahery.
Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny filozofian'ny orinasa "fanavaozana ny zava-misy, kalitao aloha". Manolo-tena hamokatra borosy nify tsara kokoa hanompoana ny mpanjifa.
Namorona vokatra tsara tarehy ho anao izahay!